बाघको छालासहित समातिनेलाई पाँच वर्ष कैद – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बाघको छालासहित समातिनेलाई पाँच वर्ष कैद
२०७१ श्रावण ७, बुधबार ०६:४४ गते
कसरा । बाघको छालासहित समातिएका एकजना व्यक्तिलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पाँच वर्ष कैद सुनाएको छ ।
वन्यजन्तु अपराधमा हुने यो सवैभन्दा कम सजाय हो । विसं. २०६९ साल साउन १२ मा समातिएका मकवानपुर काँकडा गाविस वडा नं. ४ स्थायी घर भई मकवानपुर मनहरी वडा नं. २ नयाँबस्तीका सीताराम थिङलाई निकुञ्जले उक्त सजाय तोकेको हो ।
निकुञ्जले गएको असार तीन गते थिङलाई कैद सजाय गरेको थियो । निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी टीकाराम पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराएका हुन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको मनहरीमा बाघको साढे सात किलो हड्डी बिक्री हुँदैछ भन्ने सूचना पाएका आधारमा पुगेको निकुञ्जको गस्ती टोलीले थिङलाई समाएको थियो । गस्ती टोलीले समाउँदा थिङबाट बाघको हड्डी नभई बाघको छाला बरामद गरेको थियो ।
बाघ, गैंडा जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु मारेमा वा त्यस्ता जनावरहरुको अंग बिक्री गरेमा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा कैद र जरिबाना दुवै हुन सक्ने निकुञ्ज ऐनमा व्यवस्था छ ।
निकुञ्जले सोही मुद्दामा फरार प्रतिवादी रहेका दुईजनालाई पनि समाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भरतपुर कारागार चलान गरेको छ । थिङकै साथीहरु सुकुमबहादुर मोक्तान र गुणराज रूम्बालाई निकुञ्जले साउन दुई गते शुक्रबार भरतपुर कारागारमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । उनीहरु विरूद्ध थिङसँगै मुद्दा चलेको थियो ।
मोक्तान र रूम्बा दुवैजना थिङको जस्तै काँकडा घर भए पनि मनहरीमा बस्दै आएका थिए । निकुञ्जले सुकुमबहादुरलाई असार आठ गते समाएको थियो । त्यस्तै, गुणराज त्यसको हप्ता दिनपछि असार १५ मा पक्राउ परेका थिए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज दुर्लभ बाघको मुख्य वासस्थल हो । अघिल्लो वर्ष घोषणा भएको गणनाको नतिजाअनुसार यस निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १२० बाघ रहेका छन् ।
तस्करहरुले छाला, हड्डी, रौं र नङ्ग्रासमेत अन्तर्राष्ट्रिय अवैध बजारमा लागेर बेच्न बाघ मार्ने गर्दछन् । अंगको तस्करीका लागि बाघ मार्नाले यसको संख्या दिन प्रतिदिन कम हुँदै गएका कारण संरक्षणकर्मीहरु चिन्तित छन् ।
चितवन निकुञ्जले निकालेको विज्ञप्तिमा निकुञ्ज आसपास बस्नेलाई क्षणिक लाभ देखाएर तस्करहरुले चोरी सिकारमा संलग्न गराएको उल्लेख छ । ‘हामी वन्यजन्तु अपराधसँग सम्बन्धित कुनै घटना हुनै नदिन नियमित गस्तीमा लागेका छौं । घटना भएमा संलग्नहरुलाई समात्न र कानुनी कारबाही गर्न निरञ्तर लागेका छौं । त्यसैले यस्ता अपराधमा कोही सामेल नहुनु होला’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।